जेठ २० गते वाट निषेधाज्ञा खोल्ने। – कर्णाली 24 डट कम
Karnali 24१७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०९:०१
नागरिककै स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर २० गतेसम्मको निषेधाज्ञामा कडाइ गरिएको पराजुली बताउँछन् । तर, अब विस्तारै स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाइ गरेर निषेधाज्ञा केही सहज बनाउनुपर्नेमा प्रजिअ पराजुली सहमत छन् । तर, अहिले नै संक्रमणको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।जेठ २० गतेपछि खाद्यान्न र किराना पसल भने बिहानको समयमा खोल्ने तयारी छ । २० गतेसम्म तरकारी पसलबाहेक अन्य सबै पसल बन्द गर्ने प्रशासनको निर्णय छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत अहिलेको भन्दा केही बढी मात्रामा खुलाउन दिने तयारी छ ।निषेधाज्ञा जारी राखेरै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जनजीवन सहज नाउनेतर्फ आफूहरु सकारात्मक रहेको पराजुली बताउँछन् ।
उनले भने, “संक्रमणको दर घट्दै गए केही सहज पक्कै हुन्छ । तर, के–के हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन ।”निषेधाज्ञा बढ्दै जाँदा कतिपयले नागरिकलाई कहिलेसम्म थुनेर राख्ने हो भनेर आउने गुनासाहरुबारे पनि आफू जानकार रहेको पराजुली बताउँछन् ।
गायिका इन्दिरा जाेशिले काे संग गरिन् सुटुक्क इन्गेजमेन्ट? १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०९:०१
चितवनमा माेटरसाईकल “ग्राहकको मागअनुसार ब्राण्ड, रङ्ग, मोडल खोजी खोजी चोरी १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०९:०१
यस्तो हत्यारालाई के गर्नुपर्छ? ‘टाउको, घुँडाभन्दा तल र कम्मरभन्दा माथिको भाग अझै भेटिएको छैन्:प्रहरी १७ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०९:०१